Jaamacadaha baahan Bannaanbaxyada sida qayb ka mid ah codsiga affirmations. waraaqaha Kuwan waxaa loo isticmaalay si ay u degaan on understudies weyn iyo understudies cajiib ah. Jaamacadaha ayaa raadinaya understudies taageera doonaa sawirka. Waxaa hubin understudies in uu noqon doono taam nadiifsan ah dugsiga si kastaba ha ahaatee waxay si fudud u baahan tahay caawimaad article yar.
Well sheekooyinka sheekeeyey dhufsan doono tixgelin peruser ee ka xoogbadan, wax si fudud u muujiyaan wax. Tani waxaa laga yaabaa in uu yahay musharax baadi ugu fiican u yaqaan dhigi on xaqiijinta Bannaanbaxyada ay. Si aad u muujiso xariif ah in ay keentay in miisaan yareynta lixdan pound ah oo muujinaysa dheeraad ah si daacad ah si peruser ka badan isku dayayaan in ay yidhaahdaan nin u shaqeeya.
Sida loo qoro A meelayn kuliyadeed WANAAGSAN Qormo
Tibaaxo in keyd ah u maleeyo ku saabsan dhulka waa isku mid. Sheegista agagaarka ganay in beddelay jidka koox saameeyeen agagaarkeeda waa gebi ahaan kala duwan. Sunogoogga sheekada Sheegay peruser ku saabsan ka dhacay kala bixinta. Waxaa sheegayaa peruser ku saabsan isticmaalka inventive hantida.
keyd An xamaasad leh ka koobanahay doonaa kala ah, article mashquuliya. keyd ah in aan waa firfircoon ku saabsan wax kasta oo aan doono. In sida ugu fiican ee wax ma aha waxa dafo tixgelinta. Waa is-wacyiga in caqabadaha ka adkaada oo in niyadiisa u. Qayb ka mid ah Bannaanbaxyada fiican oo ku saabsan understudies caadi ah awoodaha caadiga ah in si fudud ma aysan joogsan marka inta kale ee doonayay in ay yihiin.
The articles fiican yihiin Ogolow. Maskaxda Ku hay, qof kasta waxa uu leeyahay awood xaddidan in ay diiradda saaraan. Affirmations articles si joogto ah ay leeyihiin xad erayga; iyaga ka fikirayn. Hab wanaagsan in ka koobanahay marka ay jiraan wax weyn in la yidhaahdo, waa in ay ka koobanahay warqadda isticmaalka erayada buu u ballaadhan yahay oo dabadeedna Dumayn iyo doorin.
Mar kasta oo ku beddelaan, xoogga saaraan mid tayo leh dabeecadda aasaasiga ah. Life badala shakhsiyaadka ka aragtiyo kala duwan; mar keli ah ma aha oo kaliya mar keli ah. Isku dayo in la aqoonsado qaybta ugu muhiim ah marmarsiinyo iyo natiijada ugu muhiimsan. Fiiro-sida sheekada unfurls.
hab kale oo weyn kama dhufsan tixgelin peruser ee waa in la ogaado fikirka ah in uu yahay lama filaan ah. Ku bilow warqada la sheekada ah in uusan waxba ku saabsan ma ku odhan hadalkay ah run ahaantii ku saabsan yahay. Deji goobta by si fudud la kulaney marmarsiinyo. Halkaa marka ay marayso in, ka hor tagaan in loo yeedho si wax muhiim ah oo ku saabsan munaasabadda in dareenka. Ugu dambeyntii dheer, caddeeyo essentialness shakhsiga ah waxaa ka mid ah. The oo dhan wax caadiga ah aad ugu haboon yahay, ayaa in ka badan caadi aheyn waxa ay heli karaan in.
understudies badan oo ka koobanahay Bannaanbaxyada wax uga dhawaajiya sida ay yihiin oo sarraysa. understudies waxay u baahan yihiin qiyaas badan ee gargaar article! Qofna ma ka maqsuuday perusing monolog is-aqoonsaday a. Sheekeeyo sheeko in xadeynta sifo aqoonsi iyo caddeeyo sida ay u caawin karaan peruser ah. Maskaxda ku hay dhismeedka af weyn iyo higgaadin sax ah, labada!
« Sida loo qoro A ku guuleystay Qormo COLLEGE ARJIGA?
SIDEE Si aad u heshaan qorayaasha Qormo XIRFADLAYAAL? »